1 KỌRINT 11 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 11)
1 KỌRINT 11
Ya mere, bụrụnụ ndị na-eṅomi m, na ndị na-eso nzọ ụkwụ m, dị ka m si eṅomi Kraịst, ma na-esokwa nzọ ụkwụ ya.
Nwoke ọ bụla kpuchiri isi ya mgbe ọ na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ezi ihe na-eme Kraịst onye bụ isi ya ihe ihere.
Ma nwanyị ọ bụla na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ezi okwu Chineke, ma o kpuchighị isi ya, na-eme di ya ihe ihere, nꞌihi na ọ dịghị ihe dị iche nꞌebe nwanyị a na nwanyị kpụchara isi ya nọ.
Ọ bụrụ na nwanyị ọ bụla achọghị ikechi isi ya, ya kpụchaa ya. A sịkwa na ọ bụkwanụ ihe ihere na nwanyị kpụchara isi ya, ka nwanyị kechie isi ya.
E si na nwoke kee nwanyị mbụ, ma e sighị na nwanyị kee nwoke.
E keghị nwoke mbụ maka nwanyị, ma e kere nwanyị mbụ maka nwoke.
Nꞌihi nke a, nwanyị kwesịrị ikpuchi isi ya igosi na ọ nọ nꞌokpuru di ya, ime ka ndị mmụọ ozi hụ ụdị omume a, site nꞌihi ya ṅụrịa ọṅụ.
Ma dị ka nzube Chineke si dị, mkpa nwanyị na-akpa nwoke, mkpa nwoke na-akpa nwanyị.
Achọrọ m ka unu tulee ihe a nꞌonwe unu, ọ̀ dị mma ka nwanyị ghebe isi ya oghe mgbe ọ na-ekpe ekpere nꞌihu ọha mmadụ?
Unu matakwara nke ọma na ọ bụ ihe ihere na nwoke ga-ebu agịrị isi dị ogologo. Nꞌihi na ọ bụ otu a ka Chineke siri mee ya.
Nwanyị nwere agịrị isi dị ogologo na-aṅụrị ọṅụ na-anyakwa isi. Akọnuche anyị na-agwakwa anyị na o kwesịrị ka nwanyị na-ekechi isi ya.
Ọ bụrụ na ọ dị onye jụrụ ịnabata ozizi a, ọ bụrụkwa na onye ahụ achọọ ịrụ ụka, nanị ihe m maara bụ na anyị, na chọọchị nile, adịghị ezi ihe ọ bụla karịa na nwanyị ọ bụla na-ekpe ekpere ma ọ bụ nke na-ekwusa ozi ọma nꞌebe ndị mmadụ nọ kwesịrị ikechi isi ya.
Ihe ndị ọzọ m chọrọ ikwu ugbu a bụ ihe gbasara ihe unu na-eme nke m na-ekwesịghị inye unu otuto nꞌihi ha. Nꞌihi na omume unu na-eme mgbe unu zukọtara nꞌime chọọchị unu bụ omume jọgburu onwe ya na njọ.
Na mmalite, ihe m na-anụ bụ na mgbe nile unu zukọrọ, ịrụ ụka nke na-ebute nkewa na-adị nꞌetiti unu. Ọ na-adịkwa m ka ihe ndị a m nụrụ bụ eziokwu.
Ana m echekwa na ụdị nkewa a na-atọ unu bụ ndị na-eme ezi ihe mgbe nile ụtọ nꞌihi na unu chọrọ ka e site nꞌụzọ dị otu a mata unu.
Mgbe unu zukọtara iri nri, ọ bụghị oriri nsọ ka unu na-eri.
Nꞌihi na anụrụ m na onye ọ bụla na-eri nri nke aka ya. Anụkwara m na ndị nile bu nri ha bịa na-ericha ya ngwangwa. Ha anaghị echere ka ndị na-enweghị nri ha ji bịa soro ha keta oke na nri ha ji bịa. Nꞌihi nke a ụfọdụ na-eribiga nri oke mgbe ndị ọzọ na-anọ agụụ. Ụfọdụ kwa na-aṅụbiga mmanya oke bụrụ ndị mmanya na-egbu.
A ga-akpọ nke a gịnị? Ọ̀ bụ na unu enweghị ike iri nri na ịnụ mmanya nꞌụlọ unu tupuu unu abịa nꞌụlọ chọọchị? Karịa na unu ga-ebu ihe ndị a bịa nꞌime chọọchị ime ndị ogbenye na ndị na-enweghị ike iweta nri nke ha ihe ihere. Gịnị ọzọ ka unu chọrọ ka m kwuo banyere ihe ndị a? Ùnu chọrọ ka m too unu? Mbaa!
Nꞌihi na ihe m ziri unu banyere oriri nsọ bụ ihe Onyenwe anyị ziri m. Nꞌabalị ụbọchị ahụ Judas rara ya nye nꞌaka ndị ga-egbu ya, Onyenwe anyị Jisọs weere otu ogbe beredi.
Mgbe o nyechara Chineke ekele nꞌihi ya ọ nyawara ya nye ya ndị na-eso ụzọ ya sị ha, “Naranụ beredi a taa, nꞌihi na nke a bụ anụ ahụ m nke a na-enye nꞌihi unu. Na-emenụ nke a iji cheta m.”
Nꞌụzọ dị otu a kwa, o bulitere otu iko mmanya mgbe ha risịrị nri sị, “Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị nꞌetiti unu na Chineke, nke e ji ọbara m mee ka o guzosie ike. Meekwanụ otu a icheta m.”
Nꞌihi na mgbe ọ bụla unu na-eri nri a na-aṅụkwa site nꞌiko a, unu na-akọ akụkọ banyere ọnwụ Jisọs. Na-emekwanụ nke a tutuu ruo mgbe ọ laghachiri ọzọ.
Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla ataa beredi Onyenwe anyị ma ọ bụ ṅụọ site nꞌiko Onyenwe anyị nꞌụzọ na-ekwesịghị ekwesị, onye ahụ na-emehie megide anụ ahụ Kraịst na ọbara ya.
Ọ bụ nke a mere o ji bụrụ ihe dị mkpa ka onye ọ bụla nyochaa onwe ya nke ọma tupuu o rie beredi ahụ ma ọ bụ ṅụọ site nꞌiko ahụ.
Nꞌihi na ọ bụrụ na onye ahụ ataa beredi ahụ ma ọ bụ ṅụọ site nꞌiko ahụ nꞌụzọ na-ekwesịghị ekwesị, na-echeghị echiche banyere anụ ahụ Kraịst na ihe ọ pụtara, ọ na-eri, na-aṅụtara onwe ya ikpe ọmụma Chineke, nꞌihi na ọ bụ ọnwụ Kraịst ka o ji egwuri egwu.
Ọ bụ nke a mere ọtụtụ nꞌime unu ji bụrụ ndị ahụ na-esighị ike, ndị nọ nꞌọrịa na ndị dara nꞌụra ọnwụ.
Ọ bụrụ na unu enyochaa onwe unu nke ọma tupuu unu erie oriri nsọ unu agaghị adaba nꞌikpe na ahụhụ Chineke.
Ma otu ọ dị, ọ bụrụ na Onyenwe anyị ekpee anyị ikpe, ma ọ bụ taa anyị ahụhụ, ọ bụ nꞌihi na ọ chọrọ ka a hapụ ịmakọ anyị na ndị ụwa ikpe.
Ya mere, ụmụnna m, mgbe unu bịara iri oriri nsọ cherenụ ibe unu.
Ọ bụrụ na agụụ agụọ onye ọ bụla ya rie nri nꞌụlọ ya, ka ọ hapụ iwetara onwe ya ikpe ọmụma Chineke, mgbe unu nile zukọtara. Aga m edozi okwu ndị ọzọ mgbe m bịara.
1 KỌRINT 11:1
1 KỌRINT 11:8
1 KỌRINT 11:9
1 KỌRINT 11:10
1 KỌRINT 11:11
1 KỌRINT 11:14
1 KỌRINT 11:15
1 KỌRINT 11:16
1 KỌRINT 11:17
1 KỌRINT 11:18
1 KỌRINT 11:19
1 KỌRINT 11:20
1 KỌRINT 11:21
1 KỌRINT 11:22
1 KỌRINT 11:23
1 KỌRINT 11:24
1 KỌRINT 11:25
1 KỌRINT 11:26
1 KỌRINT 11:27
1 KỌRINT 11:28
1 KỌRINT 11:29
1 KỌRINT 11:30
1 KỌRINT 11:32
1 KỌRINT 11:33
1 KỌRINT 11:34